ဆီဘီးလျှပ်စစ်စကူတာထုတ်လုပ် - Xiangyou
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လူကြီးလျှပ်စစ် Scooter > ဆီဘီးလျှပ်စစ် Scooter
Fat Wheel Electric Scooter တွင်ခရီးဆောင်ခေါက်ဒီဇိုင်းနှင့်ဘရိတ်စနစ်နှစ်မျိုးရှိပြီးဘက်ထရီသက်တမ်းမှာကီလိုမီတာ ၃၀ အထိဖြစ်သည်။ Fat Wheel Electric Scooter သည်ပေါ့ပါး။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးခေါက်နိုင်သောဘောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
၈.၅ လက်မဘီးဆီဘီးလျှပ်စစ် Scooter ကီလိုမီတာ ၃၀ ရှည်လျားသည့်ဘက်ထရီသက်တမ်း၊ မော်တော်ကားစွမ်းအားဖြင့် lithium ဘက်ထရီ၊
ဆီဘီးလျှပ်စစ် Scooter3 ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအတွက်ခေါက်နိုင်ပါတယ်
ဆီဘီးလျှပ်စစ် Scooter with LED display
၅ ။Product Qualification of ဆီဘီးလျှပ်စစ် Scooter
Vapaa-001 ၈.၅ လက်မဘီးဆီဘီးလျှပ်စစ် Scooter , passed EMC/LVD/EN15194/EN14619/MSDS/UN38.3 certification.
6.Deliver,Shipping And Serving of ဆီဘီးလျှပ်စစ် Scooter
A3: Generally, we pack the ဆီဘီးလျှပ်စစ် Scooter in carton box with thick foam board inside for protection.
hot Tags:: ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း၊ ၀ တ်စုံ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ပုံစံအသစ်၊ Hot Sale, ၂၀၂၀ ခေါက်သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်း၊ မူရင်းအသစ်၊ OEM စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ တရုတ်၊ , တရုတ်စက်ရုံ, ဥရောပကုန်လှောင်ရုံ, အီးစတော့အိတ်, စျေးပေါ, လျှော့စျေး, အနိမ့်စျေး, လျှော့စျေး, စျေး, စျေးနှုန်းစာရင်း, စျေးနှုန်း, CE, ဖက်ရှင်, နောက်ဆုံးပေါ်, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အကြမ်းခံ, လွယ်ကူသော - ထိန်းသိမ်းထား, လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းထား, နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်း, တစ်နှစ်အာမခံ, Classy၊ ဖန်စီ၊ အိတ်ဆောင်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ခေါက်သိမ်းနိုင်သော၊